Gịnị mere Anyị - Huizhou Xinsanxing Lighting Co., Ltd.
Oriọna rattan dị ọhụrụ, ọmarịcha ma na-translucent, mara mma ma ọ nweghị echiche ọhụrụ nke oge a. O nwere ikike na nka, ma enwere ike imeghari ya na gburugburu di iche. A naghị ele ya anya dị oke oke mgbe etinye ya n'ime ụlọ oyi, ọ naghị enwe ihere mgbe etinye ya na Huatang. , Enwere ike ịsị na ndị ọgaranya na ndị ogbenye dabara adaba ọgaranya na ndị ogbenye, ndị mara mma na ndị rụrụ arụ dabara adaba, yabụ na erere ngwaahịa ndị a mgbe niile.
Na-adabere na ya; Nkà na ịchọ mma.
Ọdịdị dị mma na edo edo.
Weta usoro nchedo gburugburu ebe obibi nke puru iche.
Nweta Aka na Ngalaba Anyị, Ndụmọdụ na nkọwapụta ngwa ngwa maka ọrụ gị niile.
Site na ogologo akụkọ ihe mere eme, China nwere ogologo oge, malite na oge ochie, na-eme nke ọma na usoro Tang na Song, na-enwekwa ọganihu na Ọchịchị Ming na Qing. Qu Dajun's "Guangdong Xinyu" nke usoro ochichi Qing nwere: "Lingnan rattans kacha dị na ụwa. Ha na-akpa akwa ma na-eme rattan, mana naanị abụọ n'ime ha." Ka ọtụtụ puku afọ gachara, ọ sitere na nka ịkpa nka na-arụ ọrụ ruo taa amamịghe ịkpa akwa rattan. nka.
Kpara Oriọna Rattan
Natural ihe ndị dị ka eke rattan, phoebe achara, mkpuchi, wdg Rattan, ya na anụ bụ ezigbo onye na agba, na-ele ezigbo, na nwere magburu onwe elasticity. Ọ bụ ezigbo eke kpara ihe. Oriọna rattan ejiri nke a mee nwere ọmarịcha ọrụ aka, ụdị dị iche iche, na ngwa ngwa, ndị ahịa na-ahụkwa ya n'anya kemgbe ụwa.
Wekpa ákwà na-agakarị ihe karịrị usoro iri na abụọ dịka rattan (ịkpụ ụdọ na rattan), ịtụtụkọta rattan, ịsacha rattan, ịmịkpọ ahịhịa, ịgbagọrịrị rattan, ịdọta rattan, ịkpụcha rattan, ịcha ọcha, ịcha ákwà, ịkwa ákwà, eserese, wdg.
Ntanetị nke Rattan na-adaberekarị na ngalaba rattan, isi rattan ma ọ bụ achara, wee jiri akwa rattan ma ọ bụ obere rattan na-arụ ọrụ, na-enye egwuregwu zuru oke na njirimara nke ịdị nro nke rattan na nkwụsị nke imebi.
N'ihe banyere agba, a na-ejikarị agba odo nke rattan mbụ eme ihe, ma ọ bụ na-edozi ya ma na-acha ọcha n'ime ọcha ma ọ bụ ọdụ́, nke dị nro ma mara mma, ụfọdụ jikọtara kọfị, agba aja aja, wdg. ọkpụrụkpụ rattan, bụ nke akpọgidere ma jiri akwa ogbugbo na isi ya mee ya, mechaa mee ya agba ma ọ bụ nwee agba.
Wetara gị udo nke uche, zuru ike, ahụmịhe na-enweghị nchekasị na ọ enjoyụ.
Achọrọ m N'ogbe
Kedu ihe kpatara ị ji ahọrọ oriọna ndị a kpara nke Xin Sanxing
N'ịnabata osisi ịkwa akwa nke osisi dịka rattan, achara, osisi mmiri, wdg, nke teknụzụ nchebe gburugburu ebe obibi, ngwaahịa a rụchara nwere ọdịdị zuru oke, agba agba agba, na ogologo oge.
Ndị na-ese ihe ochie nwere ihe karịrị afọ 20.Ndị na-akpa ákwà nke XSX Lighting nwere afọ 20 nke ahụmịhe ọrụ, na usoro ha dị nro ma na-egosipụta ọrụ nka.
Emere ya na teknụzụ nchebe gburugburu ebe obibi pụrụ iche, enweghị mmerụ ahụ.
Otu XinSanXing nwere: ndị nna ukwu 9 nwere ihe karịrị afọ iri abụọ.
XINSANXING gbadoro ụkwụ na nka ịkpa akwa ma na-akwalite omenaala omenaala ndị China.
Tupu ịhapụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ngwaahịa ọ bụla nke XSX Lighting ga-enweta nchedo gburugburu ebe obibi siri ike, mgbochi ebu na ahụhụ na-egosi ọgwụgwọ, nyocha iru mmiri, na nnwale ya na ihe nyocha mmiri pụrụ iche maka osisi;
XINSANXING na-eme ka iru mmiri nke ngwaahịa ndị ahụ dị n'okpuru ogo 14 tupu ha ahapụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, nke na-ezute ụkpụrụ nke ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ọkụ;
Single ngwaahịa yiri nkata: ihe karịrị 20 ụdị nke otu ngwaahịa nwere 1,000, na nnyefe okirikiri bụ ngwa ngwa.
XINSANXING na-ekwe nkwa nnyefe nnyefe
XSX rattan art lamp is transported with 5 layers nke kraft mesikwuru akwụkwọ, na mpụta nkwakọ ngwaahịa nọgidere na-enwe na a osisi etiti, nke mere na onye ọ bụla ibe bụ emebibeghị;
All XINSANXING ngwaahịa na-ekwe nkwa maka afọ 2 n'ime akporo nke nkịtị were mgbe ha na-ahapụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Mgbe-ahịa nkwa na-ekwe nkwa;